Uyikhubaza njani iWindows Defender kwi Windows 10 | Iindaba zeGajethi
Uyikhubaza njani iWindows Defender ngaphakathi Windows 10
UIgnacio Sala | | Tutorials, Windows
Ngokwaziswa Windows 10, UMicrosoft wongeze iWindows Defender, enye ye-antivirus efanelekileyo esinokuyifumana ngoku kwimarike Kwaye simahla simahla kwaye sinemihla ngemihla yokuhlaziya. IWindows Defender ayisiyiyo kuphela Iyasikhusela nakweyiphi na intsholongwane okanye i-malware, kodwa iyasikhusela nakwi-spyware, i-ramsonware kunye nezinye izinto ezithatha indawo.
Ngelixa kuyinyani ukuba ukudityaniswa ngokwemveli kwinkqubo yokusebenza, ngamanye amaxesha kunokubangela enye ingxaki kwinkqubo, ezi ngxaki zisonjululwa ngokukhawuleza ngohlaziyo olulula. Ukuba ngaphandle kwezibonelelo esizifumana kwiWindows Defender, uyavuma ukuba usebenzisa ixesha lakho lokuphila, siza kukubonisa Uyikhupha njani iWindows Defender.
1 Sisinikwa yintoni yiWindows Defender
2 Uyikhubaza njani iWindows Defender kwi Windows 10 Ekhaya
3 Uyikhubaza njani iWindows Defender kwi Windows 10 Pro, Enterprise, okanye Education
4 I-Windows Defender okanye i-antivirus yesiko?
Sisinikwa yintoni yiWindows Defender
Windows Defender yakhelwe ngaphakathi Windows 10, kwaye isebenza ngasemva, kodwa ngokungafaniyo ne-antivirus yesiko, le Isebenzisa izixhobo ezimbalwa kwaye asizukuqaphela ukuba iyasebenza.
Enkosi nge-Windows antivirus, asinayo inkqubo yethu ekhuselweyo nakweyiphi na ifayile enobungozi esiyikhuphelayo okanye eyoyikisayo kwikhompyuter yethu, isivumela ukuba sizikhusele kwi-ramsonware. I-Ramsonware sisongelo esilawula ukubethela yonke imixholo yezixhobo zethu endaweni yokuhlawulela intlawulelo yemali, ethi xa uyihlawula kungabikho mntu usiqinisekisayo ukuba baya kusinika iphasiwedi yokubhala.
Isinceda njani ukuzikhusela kuhlaselo lwentlawulelo? Ukukhusela iifolda apho sigcina khona olona lwazi lubaluleke kakhulu kwiqela lethu. Ngale ndlela, sinokumisela ukuba zeziphi iinkqubo ezinokufikelela kwezo folda, ke ukuba isicelo sizama ukwenza njalo, asizukufikelela nangaliphi na ixesha kwaye sibethela umxholo waso.
Windows Defender ikwasivumela ukuba siqwalasele ukusebenza kweWindows Firewall, ukuthintela oko xa sinxibelelana nothungelwano lukawonkewonke, akukho mntu unokufikelela kwiimoto esabelana ngazo ngokwendalo. Ikwasikhusela xa sifaka usetyenziso kwikhompyuter yethu ngokusebenzisa iSmartScreen function, esivumela ukuba sibhloke naluphi na ufakelo okanye sazise isilumkiso.
Njengoko sinokubona, imisebenzi esikhuselwa yiWindows Defender ngokwendalo iyafana ukuba sinokuyifumana nakwezinye ii-antivirus. Kungekudala emva kokukhutshwa Windows 10, abenzi be-software abambalwa baphakamise ukubakho kokumangalela iMicrosoft yeWindows Defender, ibango elathi ekugqibeleni labhanga.
Uyikhubaza njani iWindows Defender kwi Windows 10 Ekhaya
IMicrosoft isinika iinguqulelo ezahlukeneyo Windows 10 kwintengiso, zonke zijolise kwiindawo ezahlukeneyo. Inguqulelo yasekhaya yenzelwe abasebenzisi babucala kunye namashishini amancinci. Inguqulelo yePro Windows 10 ijolise kwiinkampani ezinkulu, kuba isinika uthotho lwemisebenzi enje ngoncedo olukude ayifumaneki kuhlobo lweKhaya.
Inguqulelo yeshishini Windows 10 isinika yonke imisebenzi Windows 10 Ikhaya kunye nePro kodwa kunye nefayile ye- ulawulo olukhulu kunye nokulawulwa kwezixhobo kude, Ngelixa uguqulelo lwezeMfundo lusebenza ngokufanayo nohlobo lwasekhaya, kodwa ngexabiso eliphantsi, kuba lenzelwe abafundi.
Ukuba ufuna ukukhubaza iWindows Defender Windows 10 Ekhaya, inkqubo yahlukile kwezinye iinguqulelo, Inkqubo esineenkcukacha apha ngezantsi. Kodwa okokuqala, kufuneka sicace gca malunga nento esiyenzayo, kuba xa singena kwiRegistry yeWindows, sinokuguqula naliphi na ixabiso ngaphandle kokwazi nokuba ikhompyuter yakho iyeke ukusebenza ngokupheleleyo.
Kuqala, siya kwibhokisi yokukhangela kaCortana kwaye sichwetheze "regedit" ngaphandle kwezicatshulwa. Kumbuzo Ufuna ukuyivumela le nto? Cofa u-Ewe.
Emva koko siya kwindlela HKEYUKUZIPHATHAKOMATSHINI \_ SOFTWARE \_ Imigaqo-nkqubo \_ Microsoft \_ Windows Defender
Ngaphakathi kwifolda yeWindows Defender, sifumana ifayile ye-DisableAntiSpyware kwaye ucofe kuyo kabini.
Okokugqibela, kufuneka silitshintshe ixabiso 0 liye 1, cofa ku ukwamukela y qala ikhompyuter yethu.
Ukuba asiyifumani ifayile yeDisableAntiSpyware, kufuneka siyenze ngokulandela amanyathelo endiwabonileyo apha ngezantsi:
Ngaphakathi kwifolda yeWindows Defender, cofa kwiqhosha lasekunene leqhosha Entsha> Ixabiso le-DWORD (i-32-bit).
Emva koko, nqakraza kuyo, sitshintshe igama layo kwi-DisableAntiSpyware. Emva koko, cofa ku Lungisa kwaye utshintshe ixabiso ukusuka ku-0 ukuya ku-1.
Cofa apha ukwamukela y saqalisa izixhobo zethu.
Uyikhubaza njani iWindows Defender kwi Windows 10 Pro, Enterprise, okanye Education
Inkqubo yokwenza iWindows Defender isebenze ngaphakathi Windows 10 Ipro, iShishini okanye iMfundo yahlukile, kuba asinakukwenza oko kwirejista kodwa ngoMgaqo-nkqubo weQela, senza la manyathelo alandelayo:
Kwibhokisi yokukhangela yaseCortana sibhala "gpedit.msc" ngaphandle kwezicatshulwa. Kumbuzo Ufuna ukuyivumela le nto? Cofa u-Ewe.
Ngaphakathi kwifestile yomhleli womgaqo-nkqubo kufuneka silandele le ndlela ilandelayo: Uqwalaselo lweKhompyuter> Iitemplate zoLawulo> IiComputer zeWindows> Windows Defender Antivirus.
Emva koko, siya kwiphaneli esekunene kwaye ucofe kabini Khubaza iWindows Defender Antivirus.
Kwiwindow ephumayo, kufuneka ucofe ukukhangela ibhokisi eyenziweyo. Okokugqibela sicofa ku Faka kwaye wamkele ngale ndlela.
Ukuze utshintsho luqale ukusebenza kufuneka siqale kabusha ikhompyuter yethu.
I-Windows Defender okanye i-antivirus yesiko?
Ukusukela Windows Defender yeza kwimarike yemveli nayo Windows 10, zininzi izifundo ezahlukeneyo ezibonisa indlela ngeWindows Defender sinokwaneleyo ukuhlangabezana neemfuno zakhe nawuphina umntu okanye inkampani, ukuba nje sisebenzisa ulwazi kwaye singazinikeli ekukhupheleni nasekufakeni nasiphi na isicelo okanye ifayile esiyifumana phaya okanye siyifumana nge-imeyile.
Ngaphandle kokuba iimfuno zakho zichazwe ngokuthe ngqo, andikukhuthazi ngokukodwa ngaphandle kwayo. Ndikwihlabathi lekhompyuter iminyaka emininzi kwaye ndivavanye lonke uhlobo lweWindows esele ikhutshiwe, ke ndithetha ngolwazi lwezibakala. Windows 10 lolona hlobo luqinisekileyo lweWindows ekhutshwe nguMicrosoft kwintengiso Kwiminyaka yakutshanje, ngemvume evela Windows 7.
Ayisiyiyo kuphela eyona nguqulelo ilungileyo, kodwa ikwaquka uayikho enye ye-antivirus enamandla kwiimarike, indibaniselwano ekhusela izixhobo zethu ngalo lonke ixesha ngaphandle kokuqaphela kwethu, into esingasokuze siyifumane kwizicelo zeqela lesithathu, usetyenziso oluhlala lucotha ukusebenza kwezixhobo zethu, rhoqo.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Iindaba zeGajethi » Windows » Uyikhubaza njani iWindows Defender ngaphakathi Windows 10
Ungacoca njani kwaye ugcine indawo kwi-Android yakho